Ungalwenza njani uphicotho lweWiFi, ngaba inokuthi ingene kwi-WiFi yam? | Iindaba zeGajethi
Nangona ukusetyenziswa kwe-Intanethi kuye kwaduma phakathi kwabasebenzisi ngenxa yokwehla kwexabiso, amakhaya amaninzi namhlanje awanalo uqhagamshelo lwe-Intanethi, nangasiphi na isizathu. Ukuba sinonxibelelwano lwe-Intanethi ekhayeni lethu, kufuneka sikhumbule ukuba umqondiso awuzukufumaneka kuphela endlwini yethu, kodwa iya kufumaneka nakubamelwane bethu kwaye leyo ingaba yifowuni yokutya singayiqhekeza iWiFi.
Ukuba omnye waba bamelwane akanalo uqhagamshelo lwe-Intanethi kwaye ufuna ukuba iWiFi yethu, okanye ngenxa yokudikwa efuna ukufikelela kwinethiwekhi yethu kunye nokufikelela kwiifayile zethu, kufuneka senze konke okusemandleni ukukhusela kwaye Eyona ndlela yokwenza oku kukuqhuba uphicotho lweWifi.
1 Luthini uphicotho lweWifi?
2 Ungasichaza njani isitshixo seWifi
2.5 Izichazi magama ezine-WEP, WPA, WPA2
3 Ngaba i-Wifi yam ingangena?
4 Iingcebiso zokuthintela isitshixo seWifi ukuba singachithwa
4.1 Guqula i-SSID
4.2 Guqula igama eligqithisiweyo
4.3 IMac Block
4.4 Guqula iPIN ye-WPS emiselweyo
5 Uyenza njani i-Wifi yokubhala kwiWindows nakwiMac
6 Uyenza njani i-Wifi yokubhala kwi-Android
6.1 I-Wifi WPS WPA Tester
6.2 Ukudityaniswa kweWPS
6.3 Ukubuyiselwa kwePhasiwedi yeWifi
7 Uyenza njani i-Wifi yokubhala kwi-iOS
Luthini uphicotho lweWifi?
Ngendlela erhabaxa, uphicotho lweWifi lusazisa ukuba uthungelwano lwethu lukhuselekile. Ukujonga ukhuseleko lwenethiwekhi yethu ye-Wi-Fi, uphicotho-zincwadi lunokwenziwa ngokusetyenziswa kwezicelo ezithile ezisivumela ukuba sibambe iipakethi zolwazi ezithunyelwe ngumzila okanye imodem-modem eyenza umqondiso ukuze izame ukufikelela kuyo ubuyiselo oluyimfihlo.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ukhuseleko ngaphandle kwamacingo lwalusekwe kwi-WEP encryption, encryption ekulula kakhulu ukuba uyiqhekeze ukusebenzisa ezinye zezicelo esineenkcukacha kweli nqaku. Ngenxa yoko, eyona ndlela ikhuselekileyo yokukhusela isiginali yethu ye-Wifi kukusebenzisa ezinye iinkqubo ezikhuselekileyo zokubethela ezifana ne-WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA-AES, WPA-TKIP & AES ...
Ungasichaza njani isitshixo seWifi
Nangona kuyinyani ukuba ezi ntlobo zezicelo zokungena kwi-WiFi ziyafumaneka kwindalo ngaphandle kweLinux, le nkqubo yokusebenza yile kugxila kwelona nani likhulu lezicelo ezisivumela ukuba sihlole kwaye siphicothe iincwadi Ngawo onke amaxesha umqondiso weWifi yethu ukubona ukuba inokuba sesichengeni kangakanani okanye hayi kuhlaselo olunokwenzeka lokufuna ukufikelela kulo.
Olona lwabiwo lusetyenzisiweyo ukwenza olu hlobo lophicotho lufunyenwe kwiWifislax naseKali Linux, nangona ixesha elithile ngoku ukuhanjiswa kweWifiway kuye kwafuna ukujoyina ipati. Ngaphakathi kolwabiwo lweLinux, eyilelwe ukwenza uphicotho, sinako Fumana izixhobo ezahlukeneyo ukukhangela ukuthembeka kwesiginali yeWifi.
Okokuqala, gcinani engqondweni ukuba ezi ntlobo zezicelo ayisebenzi ngawo onke amakhadi e-Wifi, ke kuya kufuneka uthathele ingqalelo, kwaye ngokuqinisekileyo uthenge enye ehambelana nazo zonke iinkqubo ezifanelekileyo zokwenza uhlalutyo oluyimfuneko.
I-Aircrack-ng yiOfisi yoPhicotho lweWifi. I-Aircrack-ng inezixhobo ezahlukeneyo zokuzama ukufikelela kwinethiwekhi yeWifi esiyijongayo. Esikhundleni seLizwi, i-Excel, i-Powerpoint kunye nabanye sifumana izicelo ezifana ne-Airmon-ng ukubeka iliso kwiipakethi ezigqithisiweyo, i-Airodump-ng ephetheyo ekubambeni ukuhlalutya kamva, i-Airbase-ng ejongene nokudala inkohliso indawo yokufikelela yomsebenzisi ukuze aqhagamshele kuyo kwaye ngaloo ndlela afumane ngokulula iphasiwedi ...
Kangangexesha elithile ukuba yinxalenye, uninzi ziirutha ezikhethe ukusebenzisa uqhagamshelo lweWPS, uqhagamshelo oluvumela izixhobo ezimbini ukuba zinxibelelane ngaphandle kokungena ngamaphasiwedi nangaliphi na ixesha. Esi sicelo Iya kusithintela ekubeni siqhubeke sigade isiginali yeWifi esifuna ukufikelela kuzo kuba inokuwenza umsebenzi ngaphandle kwesidingo sonxibelelwano xa sele ifumene idatha eyimfuneko yokwenza njalo.
Esi sicelo sisivumela ukuba sivavanye iindawo zokungena ezinomsebenzi weWPS osebenzayo kwaye ngokweBSSID (iMac yesixhobo) iya kusinika iPIN yesixhobo. Ngale ndlela sinako ngokulula ukukhohlisa umzila ngonxibelelwano lweWPS ukuba ndibeke izimvo kwinqanaba elidlulileyo, ke kuyacetyiswa ukuba utshintshe enye. Kumfanekiso ongentla sinokubona i-PIN emiselweyo esetyenziswa kwi-WPS function ye-Huawei modem router.
Kodwa ukuba awufuni kwenza nzima ubomi bakho usebenzisa izixhobo ezahlukeneyo esinazo, ungawenza umsebenzi usebenze ngeGoYscript, eya kuthi ngokuzenzekelayo iskene kwaye izame ukufikelela kuzo zonke iinethiwekhi ze-Wi-Fi, nokuba I-WEP, iWPA okanye iimodeli ezinikezela ngoqhagamshelo kusetyenziswa iWPS.
Izichazi magama ezine-WEP, WPA, WPA2
Izichazi magama zisivumela ukuba sisuse ngokukhawuleza amaqhosha e-WiFi sisebenzisa igama loqhagamshelo lwe-SSID, eliyiphaswedi esemgangathweni esetyenziswa ngumenzi kuloo modeli. Umzekelo we-SSID onokubhaliswa kwesinye sezichazi magama ufumaneka emfanekisweni. I-SSID Vodafone694G iya kuba negama elinegama elifanayo lokungena kuzo zonke izixhobo ezinegama elifanayo. Olu hlobo lwezicelo zihlala zihlala zisebenza ngokuzenzekelayo kusetyenziso oluninzi endikhe ndachaza apha ngasentla, ndizenzela umsebenzi ngokwam.
Ngaba i-Wifi yam ingangena?
Ewe nohayi. Konke kuxhomekeke kumdla owubekileyo ekwenzeni iphasiwedi kumzila wakho. Ukuba uhlala usebenzisa amagama ezilwanyana zasekhaya, izihlobo, usapho okanye ukuba usebenzisa iipassword ezinje nge-123456789, 00000000, ipassword, igama eligqithisiweyo ... kulindeleke ukuba nabani na ozimisele ukuqhagamshela kwiWifi yakho yenze ngaphandle kweengxaki ezinkulu.
Ingxaki esiyifumana kwezi meko kukuba abahlobo babanye, banokutshintsha iphasiwedi kunye kuthintele ukuba singene kunxibelelwano lwethu lwe-intanethiNangona le ngxaki inesisombululo esilula, kodwa ukuba awuyazi, kuya kufuneka uhlawule umntu ukuze akulungiselele yona.
Isisombululo kukuseta kwakhona i-router okanye i-router-modem kuseto lwefektri.. Ukwenza njalo, kuya kufuneka ucofe iqhosha lokuseta kwakhona, ngokuqinisekileyo, ngasemva kwalo. Nje ukuba uyisete kwakhona, kuya kufuneka uphinde ulungiselele igama le-SSID kunye negama lokugqitha.
Iingcebiso zokuthintela isitshixo seWifi ukuba singachithwa
Ukuthintela ukungathembeki ngeenjongo ezimbi ekuzameni ukufikelela kwinethiwekhi yethu ye-Wifi yinkqubo elula kakhulu apho kufuneka sitshintshe kuphela ezona ndlela zisisiseko zendlela yethu okanye imodem-router, njengegama lenethiwekhi yethu yeWifi kunye negama lokugqitha lonto Kuza ngokusisiseko ukukhusela umqondiso.
Njengoko bendiphawulile apha ngasentla, uninzi lwezicelo ezinikezelwe ekwenzeni uphicotho lweWifi zineelayibrari apho ii-SSID kunye neephasiwedi ezisetyenziswa kwizixhobo zeyona nto iphambili kwi-Intanethi zigcinwa. Ngale ndlela, ukuba une-router evela kumsebenzisi ene-generic SSID, kunokwenzeka kakhulu ukuba ungangena kwisiginali yakho yeWifi ngaphandle kwengxaki.
Guqula igama eligqithisiweyo
Le ngongoma ihambelana neyangaphambili. Ukutshintsha iphasiwedi ye-Wifi yinto ekufuneka siyenzile kuqala, ukunqanda ukuba abahlobo babanye, kunye nezicelo abazisebenzisayo, banokuzama ukufikelela kwisiginali yeWifi ngokusebenzisa iilayibrari apho Umdibaniso we-SSID ugcinwe kunye negama lokugqitha elisemgangathweni.
Ukunyusa ukhuseleko koqhagamshelo kumzila wethu, uninzi lwezixhobo, nkqu nezona zidala, zisinika ithuba lokuvimba ukufikelela kwi-router usebenzisa iMac.Ukuba iMac yesixhobo sakho ayikho kuluhlu lwezixhobo ezigunyazisiweyo nezibhaliswe umzila, uqhagamshelo alunakwenzeka.
Guqula iPIN ye-WPS emiselweyo
I-PIN esetyenziswe ngokungagqibekanga kwezinye iirouters yenye indlela yokungena ukuba abahlobo babanye banokusebenzisa, ke kulula ukuyitshintsha kunye ne-SSID kunye negama lokugqitha le-router.
Uyenza njani i-Wifi yokubhala kwiWindows nakwiMac
Njengoko bendikhe ndatsho ngaphambili, uninzi lwezicelo zokuba ndikwazi ukwenza uphicotho zikwiLinux kwaye kunzima ukufumana enye indlela onokuyisebenzisa kwezinye iinkqubo zokusebenza. Umhloli-zincwadi weWifi yenye yezicelo ezimbalwa ezinokubakho esinokuzifumana kwi-Intanethi ukwenza uphicotho lweWifi kwaye siyazi ukuba isiginali yethu yeWifi ikhuselekile okanye ukuba ngokuchaseneyo ngumsele apho nabani na anokungena khona.
Njengakwizicelo ezikhoyo kwiLinux, Ikhadi elingenazingcingo lekhompyuter yethu kufuneka lihambelane nesi sicelo, kuba kungenjalo asinakuqala ukubhala. Umhloli-zincwadi weWifi sisicelo esivulelekileyo sasimahla esiza kujonga ukhuseleko lwazo zonke iinethiwekhi ezisingqongileyo, esivumela ukuba sinxibelelane ukuba ukhuseleko luphantsi kakhulu okanye alunantsingiselo.
Khuphela uMhloli-zincwadi weWifi kwiWindows
Khuphela uMhloli-zincwadi weWifi weMac
Gcina ukhumbula ukuba uMhloli-zincwadi weWifi sisicelo esenziwe kwiJava, ke kuyakufuneka ukhuphele Isoftware yeOracle kwiphepha elisemthethweni.
Uyenza njani i-Wifi yokubhala kwi-Android
Inkqubo ye-ecosystem ye-Android igcwele zizicelo zokuba zikwazi ukwenza uphicotho kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu ye-Android. Ezinye zazo zifuna ukufikelela kweengcambu, kodwa kweli nqaku siza kukubonisa kuphela ezifumaneka kwiGoogle Play Store ezinokukhutshelwa kuso nasiphi na isixhobo esifanelekileyo.
I-Wifi WPS WPA Tester
Esi sicelo, ukongeza ekubonisaneni nesichazi magama esele sithethe ngaso ngaphambili, naso vavanyo ngoqhagamshelo lweWPS kunye neePIN ezisetyenzisiweyo ngamaqela ngokwemveli. Esinye isizathu sokutshintsha kunye negama eligqithisiweyo le-Wifi kunye ne-SSID.
I-WIFI ye-WPA ye-WPA ye-WPA
Umthuthukisi: ISangiorgi Srl
Unxibelelwano lweWPS lolunye lofikelelo olunokubakho abasebenzisi abaninzi abangaluqwalaseliyo kunye nesi sicelo iya kusenza sikwazi ukufumana ngokukhawuleza.
Ukubuyiselwa kwePhasiwedi yeWifi
Ngaphantsi kwesiseko sokufumana kwakhona iphasiwedi yeWifi yethu, ukubuyiswa kwephasiwedi yeWifi kuzisiwe, isicelo esiza kuthi ukusetyenziswa kwezichazi-magama eziqhelekileyo ukuzama ukufumana umdlalo phakathi kwe-SSID kunye negama lokugqitha le-router esifuna ukufikelela kuyo.
Ukubuyisela iphasiwedi kwakhona
Umthuthukisi: Iinkqubo zikaYesu
Uyenza njani i-Wifi yokubhala kwi-iOS
Nge-WifiAudit Pro, kwi-iPhone yethu, kwi-iPad okanye kwi-iPod Touch nathi sinakoPhicotha iinethiwekhi zeWi-Fi kwimeko-bume yethu Ngaphandle kokusebenzisa ikhompyuter yeLinux, kodwa ngokucacileyo iziphumo zahluke kakhulu, njenge-Android, kuba olu hlobo lwesicelo lusebenzisa izichazi magama apho ii-SSID kunye namaqhosha aqhelekileyo kubasebenzisi be-Intanethi phantse kuwo wonke umhlaba.
Isicelo asivumeli nje ukuba sinxibelelane neenethiwekhi zeWifi esihlalutya zona kodwa ivumela ukuba sabelane ngezitshixo zeendawo zokufikelela, khangela ngemitya yamagama okanye amanani, velisa imitya yamagama okanye amanye amagama ... Nangona sisixhobo esisisiseko, sinokumangaliswa ngaxa lithile.
I-WiFiAudit Pro -iPassword zeWiFi€ 0,99
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Uyenza njani uphicotho lweWifi
I-WhatsApp sele isivumela ukuba sithumele naluphi na uhlobo lwefayile